जग हँसाउने स्वास्थ्यमन्त्रीको रुखो बोली! लाखौँको स्वास्थ्य जोखिममा - Sutra News
जग हँसाउने स्वास्थ्यमन्त्रीको रुखो बोली! लाखौँको स्वास्थ्य जोखिममा
१५, चैत्र २०७६
शुरेश शर्मा - चीनको वुहान शहरमा कोरोनाले त्राहीमाम बनाएको १ महिनामै नेपालमा कोरोना संक्रमित भेटिएको थियो। जनवरी २४ मा पहिलोपल्ट चीनको वुहानबाट फर्केका एक युवामा संक्रमण पोजिटिभ देखियो। उनी अस्पताल भर्ना भएनन्, घरमै बसेर निको भए। त्यसयता कुनै संक्रमणको केस नभेटिँदा धेरैले राहतको सास फेरेका थिए। त्यसपछि फाट्ट फुट्ट भारतमा संक्रमितहरू भेटिन थाले। कोरोनाको इपीसेन्टर चीनबाट इरान पुग्यो, त्यसपछि इटाली। अहिले कोरोनाले आफ्नो हेडक्वार्टर अमेरिका सारेको छ। शुक्रवार साँझदेखि नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या ४ पुगिसकेको छ। सबै संक्रमितहरू बाहिरबाट आएका हुन्। उनीहरूबाट नेपालमा थप कोही संक्रमित भएको भेटिएको छैन। तर स्वास्थ्य विज्ञहरूले नेपाल आएका कोरोना संक्रमितबाट थप संक्रमणको जोखिम अत्याधिक रहेको बताउने गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा परीक्षण गर्नुको विकल्प नरहने उनीहरूको सुझाव छ। तर सरकारले परीक्षणको संख्या बढाउन सकेको छैन। दक्षिण कोरिया, जापान, थाईल्याण्ड लगायतका देशहरूले आफ्नो देशमा कोरोना संक्रमित भेटिएपछि परीक्षण ह्वात्तैै बढाए। दैनिक हजारौंमा परीक्षण गरिन्छन् ती देशहरूमा। तर नेपालमा दुई अंकको संख्यामा परीक्षण हुन लागेको केही दिन यता मात्र हो। २०१९ को डिसेम्बर ३१ मा चीनमा देखिएको कोरोना भारतमा त्यसको १ महिनापछि अर्थात २०२० जनवरीमा देखिएको थियो। तर नेपालमा त्यो भन्दा अगाडि २४ जनवरीमै कोरोनाको पहिलो संक्रमण देखिएको थियो। पहिलो संक्रमित निको भइसके। हिजो बिहीवार नै फ्रान्सबाट आएकी संक्रमित युवती पनि डिस्चार्ज भइसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ।
घमण्डी स्वाभावका मन्त्री ढकालले केही साताअघि सञ्चारकर्मीले केही बोल्न अनुरोध गर्दा घरमा पाहुना आएकाले नबोल्ने भन्दै जग हँसाएका थिए। त्यसपछि सरकारले २५ जना भन्दा बढी जम्मा नहुन गरेको निर्देशन आफैंले उल्लङ्घन गर्दै मन्त्रालयमा ५० जना भन्दा बढी पत्रकार बोलाएर प्रेस मीट गरे।
निकम्मा सरकार कोरोनाको पछिल्लो संक्रमण दुबईबाट आएका धनगढीका एक युवामा देखिएको छ। २ दिन अघि पुष्टि भएका अर्का संक्रमित पनि दुबईबाट नै आएका थिए। सरकारले अहिले ‘लकडाउन’ कसरी पालना गर्नुपर्छ भन्दै जनतालाई सिकाउन व्यस्त छ। चैत १ गतेदेखि नै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्द गरिदिएको भए यो अवस्था आउने थिएन। त्यतिबेला सामाजिक सञ्जाल, पत्रपत्रिका, नागरिक समाज र जनस्वास्थ्य विज्ञहरूले सरकारलाई सुझाएका थिए। उनीहरूले भन्ने गरेका थिए, ‘सरकार ढिलो भइसक्यो, एयरपोर्ट बन्द गर।’ तर सरकारले कानमा कपास हालेर बस्यो। जनस्वास्थ्य विज्ञ डाक्टर रवीन्द्र पाण्डेले भनेका थिए, ‘अहिल्यै देश लकडाउन गरिएन इटालीको हालत हुन सक्छ। सरकारले आफ्ना नागरिक जोगाउन ढिला गरिरहेको छ।’ वरिष्ठ चिकित्सक सुन्दरमणि दीक्षितले यही दोहोर्याउँदा उनलाई कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने सम्मका कुरा उठे। ‘अहिले नेपालमा भाइरस आइसकेको छ, रोगको रूप लिन मात्र बाँकी छ,’ डाक्टर दीक्षितले भनेका थिए। उनले नेपालमा परीक्षण गर्ने किटको अभाव रहेको उतिबेलै औल्याएका थिए। अहिले त्यो तथ्य पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्यमन्त्रीको रुखो बोली ! गत फागुन २७ गते मंगलवार राष्ट्रिय युवासंघ नेपालको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै मन्त्रालयमा स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले चीनबाट ल्याइएकालाई जस्तो व्यवस्था गर्न सरकारले सबैलाई गर्न नसक्ने रुखो अभिव्यक्ति दिए। उनले भने, ‘विदेशबाट आउनेहरू ‘सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्नुस्।’ उनको यो अभिव्यक्तिको ठूलो आलोचना भयो। उनले थप रुखो बन्दै बोलेका थिए, ‘सबै सरकारकै व्यवस्थापनमा बस्ने भन्ने कुरा नगरौं, अब सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्छ। दिनैपिच्छे ज्वरो आको छ, छैन त्यो नाप्न त सकिहाल्छ। यो क्वारेन्टाइनमा बस्ने जिम्मा हामीले नयाँ प्रोटोकल बनाएर लिएका छैनौं।’ घमण्डी स्वाभावका मन्त्री ढकालले केही साताअघि सञ्चारकर्मीले केही बोल्न अनुरोध गर्दा घरमा पाहुना आएकाले नबोल्ने भन्दै जग हँसाएका थिए। त्यसपछि सरकारले २५ जना भन्दा बढी जम्मा नहुन गरेको निर्देशन आफैंले उल्लङ्घन गर्दै मन्त्रालयमा ५० जना भन्दा बढी पत्रकार बोलाएर प्रेस मीट गरे। उनको गैरजिम्मेवारीपन यत्तिमै रोकिएन। नेपालमा भेटिएको तेस्रो संक्रमित व्यक्ति कतारबाट आएको भनेर जनतालाई गलत सूचना दिए। धादिङ घर भएका ती संक्रमित युएईबाट चैत्र ६ गते नेपाल आएका थिए। उनले डाक्टरहरूले उपचारका क्रममा लगाउनुपर्ने सुरक्षा सामग्रीहरूका बारेमा गरेको टिप्पणी त अझ असहिष्णु छ। ‘मान्छेहरूले भान्छामा पनि पीपीई चाहियो भन्न थालेका छन्,’ उनले एक सम्मेलनमा भनेका थिए। ढकाल विज्ञ होइनन्। मन्त्रीले यस्तो संवेदनशील क्षणमा विज्ञहरूको सहयोग लिएर मात्र जनतालाई सत्य कुरा बताउनुपर्नेमा ढकालले आफैंले आफैंलाई सर्वज्ञाता झैं प्रस्तुत गरिरहेका छन्। खै कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ ? चैत १ गतेदेखि विदेशबाट आउनेहरू अनिवार्य रूपमा प्रशासनको निगरानीमा होम क्वारेन्टाइन बस्नुपर्ने निर्णय भयो। त्यसपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्द नहुने दिनसम्म ३० हजारको हाराहारीमा विदेशबाट मानिसहरू नेपाल आए। अधिकांश नेपाली नै थिए। तिनीहरू कहाँ कसको निगरानीमा क्वारेन्टाइन बसेका छन्, सरकारसँग आधिकारिक तथ्यांक छैन। तीमध्ये ३ जनामा कोरोनाको संक्रमण भेटिएको छ। तिनीहरू नेपाल आउँदा जहाजमा कोको थिए, अहिले कहाँ छन्, अवतरण भइसकेपछि कहाँ कहाँ पुगेर कोकसको सम्पर्कमा आए, यी सबै तथ्यहरू सरकारसँग छैनन्। कतिपय अझै पनि लुकेर रहेको अनुमान छ। पहिलो कुरा चैत १ गतेदेखि नै विमानस्थल बन्द गरेको भए सरकारको केही जाने थिएन। यदि बाहिरबाट आउनेहरूलाई आउन दिएको भएपनि उनीहरूलाई छुट्टै बस्ने व्यवस्था मिलाउन सक्थ्यो सरकारले। तर सरकारले त्यतिबेला गरेको गल्तीको परिणाम यतिबेला जनताले भोग्नुपर्ने त्रास सिर्जना भएको छ। यतिबेला प्रहरी प्रशासनले लकडाउनको उल्लङ्घन गर्नेलाई लाठी हान्ने निर्देशन मातहतका प्रहरीलाई दिएको छ। तर सरकारले त्यतिबेला गरेको गल्तीमा कुनै आधिकारिक निकायबाट क्षमा याचना आएको देखिँदैन। यसबाट प्रश्न उठेको छ, सरकारको लापरवाहीले लाखौँ जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड भएको छ। माफी माग्नुपर्दैन ?
प्रकाशित मिति :चैत्र १५, २०७६ शनिवार - ०९:४७:०६ बजे